Ny fampihorohoroana avy any an-dranomasina dia manafika ny 'The Beach House' an'i Shudder
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny fampihorohoroana avy any an-dranomasina dia manafika ny 'The Beach House' an'i Shudder
by Timothy Rawles Jolay 6, 2020
by Timothy Rawles Jolay 6, 2020 1,322 hevitra
Nanome i Shudder mpanjifa be dia be ny atiny tsara mandritra ny areti-mandringana ary tsy misy ankanavaka amin'ity herinandro ity. Navoaka ny famoahana horohoro The House House tamin'ny Jolay 9.
Ao amin'ity biby mandady tontolo iainana ity dia mahita an'i Emily sy Randall mitsangatsangana any amin'ny tranon'ny ranomasina misy ny fianakaviany izahay:
“Ny fitsangatsiananan'izy ireo amin'ny vanim-potoana tsy ara-potoana dia notapahin'i Mitch sy Jane Turner, mpivady efa zokinjok'izy ireo nifankahalala tamin-drainy nivady. Ny fifamatorana tsy nampoizina dia niforona rehefa namotsotra sy nankafy ny fitokana-monina ireo mpivady, saingy nahitana fiovana mahatsiravina izany rehefa nanomboka nivadibadika ny takarivan'ny fiadanany ireo trangam-piainana hafahafa izay miha-hafahafa. Rehefa miharihary ny vokatry ny aretina iray dia niady mafy i Emily mba hahazo ny hevitr'ilay areti-mifindra alohan'ny tara loatra. ”
Ilay tranofiara, izay manaraka eto ambany, dia samy manana ny fahatsapany azy roa ny zavatra ary Fanitsakitsahana ny vatosoa.
Ny talen'ny Jeffrey A. Brown dia manana ambadika scouting amin'ny toerana misy azy ary nampiasa io fahaiza-manao io hametrahana ny toe-tsaina The House House. Ankoatr'izay, te-hanao horonantsary nankalazana ny fampiasan'i Cronenburg ny horohoron-tenany izy, niaraka tamin'i John Carpenter, "ary ny nihilisman'ny tantaran'ny HP Lovecraft."
Brown nilaza tamin'ny fanambarana iray momba ilay sarimihetsika:
“Ny The Beach House dia fiezahana hanana resadresaka mivantana sy marina amin'ny mpijery. Te handray ilay zavatra tsapako fa banga tamin'ny sarimihetsika mahatsiravina aho ary atsofoka ao anaty drafitra momba ny script sy ny famokarana izany. Ny ahiahy momba ny fiandohan'ny apokalypsy momba ny tontolo iainana no nahatonga ilay fiara hampihorohoro, raha ny fahalianana tamin'ny siansa fivoarana no nahatonga ny microbial hitantara. "
The House House tonga amin'ny Shudder 9 Jolay.
Browse Cateories Select Category 4K UHD (4) Amazon (sarimihetsika) (7) Amazon (andiany) (12) AppleTV + (6) Blu Rays (18) Horohoro amin'ny hatsikana (49) Tantara an-tsary (14) Zavatra tsara hividianana (21) Cool Stuff tokony hatao (5) Vaovao momba ny fialamboly (3) Facebook (andiany) (1) Angano (45) Rakitra hita (27) Gore (24) Haunts (3) HBO (sarimihetsika) (6) HBO (andiany) (7) Boky mahatsiravina (63) Vaovao momba ny fialam-boly mahatsiravina (10,930) Sarimihetsika mahatsiravina (425) Horror Series (126) Subgenres mahatsiravina (10) Hulu (andiany) (6) Resadresaka nifanaovana (sarimihetsika) (42) Resadresaka nifanaovana (andiany) (5) Horohoro LGBTQ (42) Lisitry (sarimihetsika) (40) Lisitry (andiany) (2) Tsena (21) Monster Horror (9) Sarimihetsika (2) Hevitra momba ny sarimihetsika (63) Sarimihetsika (15) Mozika (38) Netflix (sarimihetsika) (32) Netflix (andiany) (46) Tsy angano (5) Paranormal (76) Fampihorohoroana ara-tsaina (mampientanentana) (53) Andiany (1) Famerenana andian-dahatsoratra (9) Shudder (sarimihetsika) (55) Shudder (andiany) (19) Slasher (4) Hafahafa sy tsy mahazatra (39) Sarimihetsika mivantana (106) Streaming Series (45) Kilalao (4) Tranofiara (lalao) (1) Tranofiara (sarimihetsika) (281) Tranofiara (andiany) (49) Lalao trailer (1) Heloka tena izy (49) TV Series (4) Lalao video (190) YouTube (sarimihetsika) (3) YouTube (andiany) (13)
Vans X Horror Collection Mitondra 'It', 'The Shining' ...